INFRAWEEK 2021 - ndenye aha na-emeghe - Geofumadas
Julaị, 2021 Akụziri CAD / GIS, Microstation-Bentley
Ndebanye aha ugbu a na-emeghe maka INFRAWEEK Brazil 2021, na Bentley Systems virtual ogbako nke ga-egosipụta mmekọrịta mmekọrịta na Microsoft na ndị isi ụlọ ọrụ
Isiokwu nke afọ a ga - abụ "Otu itinye ụmụ ejima dijitalụ na usoro ọgụgụ isi nwere ikike iji nyere aka imeri nsogbu nke ụwa post-COVID."
INFRAWEEK mụrụ n'ime nsogbu nke iweta ọdịnaya dijitalụ dị mkpa ma dị mma nye ndị injinia, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, ndị na-ewu ụlọ na ndị na-arụ ọrụ akụrụngwa na mba ahụ. Na 2020, ihe omume ahụ gbakọtara, na mbipụta abụọ, ihe karịrị 3000 ọkachamara ndị nabatara ọkpụkpọ òkù ịmụ na inyocha teknụzụ ọhụrụ na ọrụ akụrụngwa ha, site na mgbanwe nke ejima dijitalụ.
Mbipụta 2021 nke INFRAWEEK Brazil Ọ ga-eme na June 23 na 24, ma kwe nkwa na ọ ga-akarị ibu. Malite na usoro mmekọrịta dị n'etiti Bentley na Microsoft, bụ onye na-ahụ maka nzukọ mmemme nke mmemme ahụ, Bentley ga-anabatakwa aha ndị buru ibu site na injinia na akụrụngwa na ahụmịhe dijitalụ zuru oke, nke ga-eleba anya isiokwu ndị dị ka obodo ndị mara mma, teknụzụ igwe ojii na otu esi eji ụmụ ejima Digital yana smart usoro nwere ike inyere aka imeri nsogbu ndị na-esote ọrịa.
Ndị sonyere ga-enwe ohere pụrụ iche iji soro ndị isi, ndị isi na ndị nnọchi anya Copel - Companhia Paranaense de Energia na-emekọ ihe, BIM Forum Brasil, ESC Engenharia, CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Consilience Analytics, ADAX Consultoria, Sabesp - Companhia de Saneamento do Estado site na São Paulo, yana ndị ọkachamara si Bentley Systems na mgbanwe dijitalụ na akụrụngwa.
A ga-enwe mgbede abụọ nke ngosi, Bentley na Microsoft ga-enyefe isi okwu mmalite, na-eme ka mmekọrịta mmekọrịta gbasaawanye na 2020 iji kwalite teknụzụ maka ejima nke akụrụngwa dijitalụ. N’ụbọchị nke iri abụọ na atọ, Alessandra Karine na Fabian Folgar na-enyocha mkpa teknụzụ igwe ojii ọhụụ bara n’ụwa ọdachị. Na 23th, Keith Bentley, onye nchoputa na CTO nke Bentley Systems, ga-emeghe ihe omume ahụ site na iji echiche ndị isi na gburugburu ebe obibi nke ụmụ ejima dijitalụ.
Ndị ọkachamara Bentley na-eweta usoro kachasị mma na teknụzụ iji mee ka ọrụ akụrụngwa gị rụọ ọrụ site na iji ejima dijitalụ maka atụmatụ obodo, nnyefe ọrụ, obodo ndị mara mma, na ndị ọzọ. N'afọ a anyị lekwasịrị anya bụ onye ọrụ, na INFRAWEEK Brasil 2021 ga-abụ nnukwu ihe ngosi na 100% mebere na enweghị ọdịnaya.
Iji sonyere ndị egwuregwu kachasị na ngalaba ahụ ma mụta maka omume kacha mma nke nnukwu ụlọ ọrụ maka ọrụ akụrụngwa ha, debanye aha n'efu site na ịpị ebe a ma gaa INFRAWEEK Brasil 2021, na June 23 na 24, na 14: 00 pm
Previous Post«Previous Bentley Systems mara ọkwa nnweta nke SPIDA
Next Post Ihe omumu ihe omumuNext »